Miyuu Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegaya in waa in aynu gacmaha isku laab iyo indhaha marka aan ku tukado? | Apg29
Ama waa habka ugu badan waxa aynu weyddiisanno unbiblical ah?
Markii Ciise hadlayaa cashuurqaade sidaas darteed ma indhihiisii ​​kor u qaaday xagga samada ayuu markii Ilaah weydiistay naxariis iyo raxmad ah. Muxuu Ciise faahfaahsan? Sababta oo ah waxa ay u tukadaan indhaha furan isticmaali u leexatay xagga samada!
Aynu dhiso isla markiiba:
Ma jiro tusaale ahaan kitaabiga ah in ay ku tukadeen gacmaha ku qaylyi, mana jiro tusaale kasta inay Indhahoodana way isku qabteen Salaadda! Sidaas daraaddeed halkaas ayaad tahay in aad dhaqso ah gacmaha oo ay indhahana aad adigu goortaad tukanaysid? Haa, ma ahan Kitaabka Quduuska ah ka soo!
Iyada oo indhaha u furan
Sidee Ciise sameeyey ee Kitaabka Quduuska ah?
John 11:41. Markaas waxay dhagaxii ka qaadeen ka soo bixiyey meeshii ninka dhintay jiifay. Oo Ciisena indhihiisuu sara kiciyey , oo wuxuu yidhi, Aabbow, waan kuugu mahad naqayaa inaad i maqashay.
Ciise goortuu mahad celiyay Aabbihiis, ayuu kor u fiiriyey. Waxa uu la tukaday furan indhaha!
Waxaa jira hal tusaale dheeraad ah ee Injiilka Yooxanaa ee Ciise ku saabsan bönesätt:
John 17: 1-dii Markaasaa Ciise ayaa ku hadlay, oo indhihiisii kor u qaaday xagga samada oo yidhi, Aabbow, saacaddii way timid. Ammaan Wiilkaaga inuu Wiilku ku ammaano,
Ciisena indhihiisuu kiciyey xagga samada markii uu ku tukaday. Saasaana si cad u arki in ay tahay Kitaabka Qudduuska ah si ay u tukadaan indhahooda furan! Haddaba maxaad isku dayin inuu ku tukado, oo ay jidka ku kitaabiga ah? Markii ugu soo socota idin baryayaaye, indhahaaga kor u qaad in Samada! U soo ducee in jidka Ciise sameeyey!
had iyo jeer Ciisena indhihiisuu sidaas oo kale kibistii samada kor ugu,:
Mat 14:19. Markaasaa dadkii oo wuxuu ku amray inay cawska ku fadhiistaan ah. Oo wuxuu qaaday shantii kibsood iyo labadii kalluun, oo intuu cirka eegay , ayuu barakeeyey oo kibistii kala jejebiyey, oo iyaga siiyey xertii siiyey, xertiina dadkii ku.
Aan aragno tusaale kale.
Luke 18:13. Laakiin cashuurqaadihii meel fog istaagay oo xataa ma uu doonaynin inuu kor indhihiisa cirka u qaado, laakiin laabtiisa ayuu garaacay isagoo leh, Ilaahow, ii naxariiso anigoo dembi leh.
Iyada oo gacmaha sara kiciyey
1 Timoteyos 2: siddeedaad Sidaa darteed waxaan doonayaa rag meel kasta waa ku tukadaan, oo kor u gacmo quduus ah, oo aan cadho iyo shaki.
Paul ka doonaynaa in ay ku baryayaaye, gacmo kor u. waxba ku saabsan ku qaylyi Waxa uu sheegay. Sababta tani waa in ay vanligate si ay baryo waa gacmo la kiciyey. Laakiinse waa xaggee meesha ma xeerkii in mid ka mid ah waa in dhaqso ah gacmahooda? No, waa Kitaabka Quduuska ah ka ay dhacdo kasta.
Marka aad kor gacmahooda si ay Ilaah u fureysaa isaga for si ka duwan haddii ay tahay in ay gacmahooda duubnaadaan, duubnaadaan ama gacmo meelo uu.
Isku day naftaada iyo aad aragto doonaa naftaada waxa uu dareensan yahay sida.
Notice in ay gacmahooda u kicin doono marka ay ku baryayaaye. "... baryo oo kor u qaad ilaa gacmo quduus ah ..." Intaa waxaa dheer, note inay sameeyaan si meel kasta . Sidaas waxa uu ahaa bönesätt caadi ah.
Tani gacmo kiciyey ma aha been abuurtay cusub ee Paul. Waxa uu leeyahay waxa ku saabsan in Axdiga Hore.
1 Kings 8:54: ". Markii Sulaymaan markuu dhammeeyey erayadan, baryo iyo call Rabbiga, oo isagu ka soo istaagay meeshii allabariga ee Rabbiga, halkaas oo uu ku lahaa uu jilbo joogay isagoo gacmaha kor samada kacay"
Sabuurradii 63: 4: "waan idin barakayn doonaa ilaa iyo inta aan ku noolahay, magacaaga ayaan gacmahayga u kor u qaadi doonaa."
Sabuurradii 141: 2 "Baryootankaygu ha sax ah aad ka hor sida foox, gacmaha kor u qaadeen sida allabariga fiidnimo ah."
Baroorashadii Yeremyaah 3:41: "ha na kor u Quluubtooda iyo gacmaheenna aynu si Ilaah oo jannada"
xigasho bible Last, waxaan aragnaa in koorsada qalbiyadeenna waxaa jiri doona marka aan gacmaheenna kor u inuu Ilaah.
Kitaabku waxa uu na barayaa, ka dibna waxaan u Ilaah ugu qaadi kartaa gacmaha iyo indhaha marka aynu isaga u tukanno. Waa hab kitaabiga ah.
V 08, lördag 27 februari 2021 kl 14:10